Iibsiga Beddit kadib, adeegga raadinta hurdada, Apple waxay isu diyaarineysaa inay daruurteeda xirto | Wararka IPhone
Inbadan oo idinka mid ah ayaa durba ku raaxeysan doona cusub Apple Watch, qalab cusub oo noo keenaya war wanaagsan oo si gaar ah diirada loogu saaray la socodka maalinteena. Oo yaa garanaya haddii Apple Watch soo socda ay noo keento war ku saabsan raadinta hurdada (ama kormeer)Ma hilmaami karno in nimankii ka socday Cupertino ay soo iibsadeen Beddit, oo ka mid ah shirkadaha hormoodka ka ah arimahan, muddo ka hor ...
Hadda waxay umuuqataa in Apple ay rabto inay bilawdo inay soo gasho Beddit, waana inay la xiriireen in adeegga keydinta xogta uu ku jiro daruuraha Beddit ayaa xirmi doona bisha soo socota ee November. Ka dib boodka waxaan ku siinaynaa dhammaan faahfaahinta hawlgalkan oo naga siin kara macluumaad ku saabsan qorshooyinka Apple ee la xiriira Beddit ...
Sidii aan soo sheegnay, ragga ka socda Beddit, ee hadda la jira Apple, waxay la xiriiraan ka tegista daruurtooda, a adeegga xirmaya Nofeembar 15 yaase garanaya haddii ay tani ka mid tahay qorshayaasha Apple ay ku ilaalinayso hurdadayada. Waa run tahriibku inuu iCloud dhammaan keydka xogta Beddit waxay macno u yeelan karaan waxaas oo dhan. Hoos waxaad ku haysaa farriinta ka muuqata qoraalka cusboonaysiinta ee barnaamijka Beddit, fariin sidaan soo sheegnay horayba nooga digtay xirnaanshaha daruurta Beddit:
Cusboonaysiintaan adeegsadayaashu mar dambe ma heli doonaan marin Beddit Cloud. Isticmaalayaashii hore sidoo kale ma heli doonaan marin Beddit Cloud illaa Nofeembar 15 of 2018.
Waan arki doonaa haddii carruurta ku jirta guriga ay ku dhiirradaan inay ku daraan astaamaha raadraaca hurdada qalabkaaga, gaar ahaan Apple Watch (in kasta oo ay tahay inaad tixgeliso Battery qulqulaya taas macnaheedu wuxuu noqon karaa gaar ahaan habeenkii). Si daacadnimo ah, uguyaraan aniga xiiso gaar ah bey ii tahay inaysan weli sameyn, laakiin iibsiga Beddit wuxuu calaamad u yahay inay tahay inay wax yimaadaan, markaa waxaan sugeynaa wax war ah oo arrintan la xiriira
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Kadib iibsashada Beddit, adeegga raadinta hurdada, Apple waxay isu diyaarineysaa inay xirto daruurteeda